How to view My Computer Properties - MYSTERY ZILLION
How to view My Computer Properties
Computer Properties ကို။ right click properties/ Window + Pause တို့ အပြင် ဘယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြည့်လို့ရပါသေးလဲခင်ဗျာ။ တချို့ဆိုင်တွေက အဲ့ဒီ Properties လေးကြည့်တာက အစ ပိတ်ထားတတ်လို့ပါ။
ကျွန်တော် သိချင်တာက။ အဲ့ဒီလို properties ကြည့်ချင်တာကို တခြားနည်းနဲ့ ကြည့်လို့ရမရရယ်။
Batch file ရေးပြီး computer information ကြည့်လို့ရမရရယ် သိချင်ပါတယ်။
Batch နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလျှင်လဲ တခါထဲ ရေးပေးစေချင်ပါတယ်.
ဂူဂယ်တော့ ကြည့်ပြီးပြီခင်ဗျ။ ရှာတာ လွဲနေလို့လား မသိဖူး မတွေ့လို။ :P
command line နဲ့ကော window+r ကိုပိတ်ထားရင်တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
command name က sysdm.cpl ပါ။ :67:
bat file ကတော့ ကျွန်တော်လဲမရေးတတ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ကို exiter ကို ကျေးဇူးပါ။
ဘယ်လိုပဲ ဖွင့်ဖွင့် sysdm.cpl ကို ပဲ သွား ဖွင့်တာပါ။ အဲတော့ sysdm.cpl ကို Policy နဲ့ပိတ်ထားရင်တော့ မရနိုင်လောက်ပါဘူး.. (ထင်တာနော် ကြိုပြောထားတာ) တခြား system information ကြည့်လို့ရတဲ့ software (e.g: Everest) တစ်ခုခုနဲ့ ကြည့်ကြည့်ပါ။ ကြည့်ရုံသက်သက်တော့ရမယ် ထင်ပါတယ်...
System Properties ကိုမှ ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့... Registry editor (or) Group Policy ကို Access လုပ်ရလားစမ်းကြည့်ပါ... GP မှာတော့ User Configuration ထဲက System (or) Windows Component (or) Control Panel ထဲမှာပါလောက်ပါတယ်။ Registry မှာတော့ Current User -> Softwares -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion ထဲမှာ Policies ဆိုပြီးပါတတ်ပါတယ်... အဲမှာ နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပြီး ဆိုင်မယ်ထင်တဲ့ Policy key မှာ 1 ဆို0ပြောင်းကြည့်လိုက်ပေါ့... delete လုပ်ပစ်လိုက်လဲ ရတာပဲ... ကျနော်လဲ အလွတ်မရဘူး... လုပ်ချင်မှ ဝင်ကြည့်.. ထင်တာတွေ လျှောက်ပြောင်းကြည့်တာပဲ....:D
တခါတလေလဲ... User level နဲ့မဟုတ်ဘဲ Machine level နဲ့ ပိတ်တတ်ပါတယ်... User တိုင်းမှာ သက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့...
Step by Step တော့ ရေးမပေးနိုင်တာ ခွင့်လွတ်ပါ... အချိန်မရလို့ပါ.... ဒီလောက်ဆို စမ်းဖို့အတွက် နည်းလမ်းရော... အလားတူ အကြံဉာဏ်ရော ရသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်... အစကနေစတာထက်တော့ အချိန်ကုန်သက်သာမှာပါ.... (ဟီး... ဒီရက်ပိုင်း.. step by step ဖြေမပေးရင် ရန်လုပ်နေလို့...:D:D:D)
P.S: ဒီ site မှာ registry tweak တွေ တော်တော်စုံပါတယ်... အစ်ကိုရဲ့ account က admin right ရှိရင်တော့... System properties ပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့ tweak တစ်ခုကို ဒေါင်းပြီး run လိုက်ပါ... registry editor ပါ ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ registry editor ကို ပြန်ဖွင့်တဲ့ tweak ကို အရင် run ပေးပေါ့... အဲ... admin right တော့ ရှိဖို့လိုတယ်နော်...
My Computer Properties နဲ့ တူမတူ။ တစ်ချက်လောက် ပြောပြပေးပါဦး။
အခုဟာတွေကို notepad မှာရေးပြီး။ .bat နဲ့သိမ်းပါတယ်။
စမ်းကြည့်တာပေါ့။ ကို်ယ်လုပ်ပြီးတဲ့အရာ ကိုယ်မသိတော့ မေးရတယ်။
echo ===== My Computer Infomation ======>C:\_systeminfo.txt
systeminfo >> C:\_systeminfo.txt
echo ===== YOUR COMPUTER INFORMATION WAS SAVE AS C:\_systeminfo.TXT !!!! =====
အဲ့မှာရတဲ့ ဟာတွေနဲ့။ computer properties နဲ့တူတူပါပဲလား။
ကျန်ခဲ့လို့။ အဲ့လိုဟာကို admin right မရှိတဲ့ လစ်မစ်ယူဇာကော သုံးလို့ရလားပါ ပြောပေးပါနော်။ :P
C: drive ထဲကို တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်ဖို့အတွက် limited user မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် folder ဆောက်ပြီးထည့်လို့ရအောင် ဒီလိုပြင်လိုက်ပါတယ်။
echo ===== My Computer Infomation ======>C:\_newinfo\_systeminfo.txt
systeminfo >> C:\_newinfo\_systeminfo.txt
echo ===== YOUR COMPUTER INFORMATION WAS SAVE AS C:\_newinfo\_systeminfo.TXT !!!! =====
ဒီလိုဆိုရင် limited user ရော limited စီးနိုင်သွားပါတယ်။:6:
yes it is so nice writing style in bat....
but i wanna know about what about the administrator block cmd(command..can i use this .bat Thank you